Posted by ကို Tranquillus | မေလ 9, 2020 | ရုံး
Windows 10 မှာ keyboard shortcut တွေအားလုံးစာရင်း။ ဘာကြောင့်လဲ။ ကောင်းပြီ, ရိုးရှင်းစွာသုံးကြိမ်ပိုမြန်အလုပ်လုပ်ရန်။ သင့် browser ထဲတွင် tab မှ tab သို့ပြောင်းပါ။ ထို့နောက်တစ်ကြောင်းလုံးကိုရွေးပြီးချက်ချင်းရိုက်ပါ။ သင်၏ဖိုလ်ဒါများကိုအမည်ပြောင်းပါ၊ ဖျက်ပစ်ပါ၊ ရွှေ့ပါ။ ဤအရာအလုံးစုံအလွန်မြန်မြန်မှာ။ သို့သော်လက်တွေ့ကျကျဘာမှမလုပ်နိုင်ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြတင်းပေါက်ပိတ်လိုက်သည့်ဤလှုပ်ရှားမှုအားလုံးကိုသိမ်းထားပါ။ နောက်တစ်ခုထပ်လုပ်ပါ ခဏကြာပြီးတဲ့အခါမှာအားလုံးကိုပိတ်ပစ်လိုက်တယ်။ ပိုပြီးရှင်းလင်းစွာကြည့်ရှုရန်ထူးခြားသောနည်းလမ်း။ သင်လုပ်ရမည့်အလုပ်ပေါ် မူတည်၍ အချို့ကိုသင်လုံးဝအသုံးမဝင်ပါ။ အခြားသူများသည်သင်တို့အတွက်မရှိမဖြစ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်နေစဉ်။
ပိုမိုမြန်ဆန်သောလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ရန်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသည့်သော့များကိုအသုံးပြုသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်ကီးဘုတ်ဖြတ်လမ်းများအကြောင်းပြောကြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ mouse ကိုထိန်းချုပ်ရန်မလိုပါ။ ကွဲပြားခြားနားသောမီနူးများ၊ ဖိုလ်ဒါများ၊ tabs များနှင့်ပြတင်းပေါက်များအတွင်းသို့သွားလာရန် ... လက်တွေ့ကျကျသင်နေ့စဉ်အသုံးချရန်အတွက်အသုံးဝင်သောကီးဘုတ်ဖြတ်လမ်းများကိုသင်အလွယ်တကူမှတ်မိနိုင်သည်။ ရိုးရှင်းပါတယ် အစပြုသူ စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုကိုငါးမိနစ်မပြည့်မီကူးယူခြင်း၊ ကူးယူခြင်း၊ ပုံနှိပ်ခြင်းသို့မဟုတ် format ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထို့နောက်သူ၏လယ်ကွင်းတွင်အရေးကြီးသည့်ကီးဘုတ်ဖြတ်လမ်းများကိုအာရုံစိုက်ရန်။
Windows တွင်လူသိများပြီးယေဘုယျအားဖြင့်ကီးဘုတ်ဖြတ်လမ်းအတွက်သုံးသောသော့များရှိသည်။ သင့်တွင် CTRL နှင့် ALT သော့များသာမက Windows သော့လည်းပါရှိသည်။ ဒါပေမယ့်သော့တွေအားလုံးလည်းရှိပါတယ်။ ကီးဘုတ်ရဲ့ထိပ်မှာရှိတဲ့ F1 ကနေ F12 ကိုသွားတဲ့သူတွေ။ ၎င်းတို့နောက်လိုက်သောကျော်ကြားသော“ In-screen” ခလုတ်ကိုမမေ့ဘဲနှင့်။ ထိုခလုတ်များကိုကီးဘုတ်၏အောက်ခြေတွင်တွေ့ရသောအခြားတစ်ခုနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။ တစ် ဦး တည်းရှိပြီးသားအလွန်တန်ဖိုးရှိသောအချိန်ကိုချွေတာပါ။ အထူးသဖြင့်သင်၌အလုပ်များစွာရှိပြီး၊ တစ်နာရီသို့မဟုတ်နှစ်နာရီအနိုင်ရရန်အလွန်ခဲယဉ်းသည်။ ရာသီဥတုသည်အထင်ကြီးစရာကောင်းသည်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်မြင်နိုင်သည်။ ဖြတ်လမ်းတိုများကိုမှန်ကန်စွာအသုံးပြုခြင်းသည်ခက်ခဲသောအခြေအနေများတွင်ခြားနားမှုဖြစ်စေသည်။
ဒါဆိုမင်းရဲ့ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်တယ်။ သင့်အတွက်အသုံးဝင်မည့် shortcuts များကိုသင်အာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်သည်။ သင့်အချိန်ကိုချွေတာသောသူတို့။ ဒါပေမယ့် Windows 10 ရဲ့ keyboard shortcuts တွေကိုလည်းမမေ့ပါနဲ့။ ဆော့ဗ်ဝဲတော်တော်များများမှာသူတို့ကိုယ်ပိုင်ကီးဘုတ်ဖြတ်လမ်းတွေရှိတယ်။ ကီးဘုတ်ဖြတ်လမ်းတစ်ခုသည်အပလီကေးရှင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်အတွင်အလုပ်မလုပ်ပါကသင်မအံ့သြသင့်ပါ Macintosh။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော Windows 10 ရှိကီးဘုတ်ဖြတ်လမ်းများ၏စာရင်းအပြည့်အစုံကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ မည်သည့်အခြေအနေတွင်ဖြတ်လမ်းကိုအသုံးပြုနိုင်မည်ကိုသတ်မှတ်သည်။ တူညီသောဖြတ်လမ်းသည် start menu နှင့် desktop ပေါ်တွင်ကွဲပြားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်ကိုသတိပြုပါ။ ဒါကြောင့်အမှားမလုပ်မိဖို့သတိထားရမယ်။
ကန ဦး mouse ကိုသုံးပါကပိုမိုမြန်ဆန်စွာသွားခြင်းကိုထင်ဟပ်စေသည်။ ဒါအမှားတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာသိထားပါ။ သင်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကီးဘုတ်ဖြတ်လမ်းများနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ရန်အလွန်စိတ်ဝင်စားသည်။ ဟုတ်ပါတယ်အစမှာဒီဟာကရှုပ်ထွေးပုံရတယ်။ အထူးသဖြင့်သင် keyboard နဲ့တကယ်သွက်လက်မနေဘူးဆိုရင်။ ထိုအခါမူကားအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ။ သငျသညျအခြားလူတိုင်းကဲ့သို့ကရန်အသုံးပြုရလိမ့်မယ်။ ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရန်တွန့်ဆုတ်မနေပါနှင့်။ အကယ်၍ သင်နှစ်သက်ပါကသင်တိုက်ရိုက်ရှာဖွေနိုင်သည်။ သင်စိတ်ဝင်စားသောကီးဘုတ်ဖြတ်လမ်း (များ) သေချာပေါက်ရှိသည်။
CTRL+A စာသားအားလုံးကိုရွေးပါ ဆော့ဗ်ဝဲအများစုတွင်အကျုံး ၀ င်သည်
CTRL + C ကို ရွေးချယ်ထားသည့်အရာတစ်ခုကိုကူးယူပါ ဆော့ဗ်ဝဲအများစုတွင်အကျုံး ၀ င်သည်
CTRL + X ကို ရွေးချယ်ထားသောပစ္စည်းကိုဖြတ်ယူပါ ဆော့ဗ်ဝဲအများစုတွင်အကျုံး ၀ င်သည်
CTRL + V ကို ရွေးချယ်ထားသည့်အရာတစ်ခုကိုကူးထည့်ပါ ဆော့ဗ်ဝဲအများစုတွင်အကျုံး ၀ င်သည်
CTRL+Z ပြီးခဲ့သည့်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုဖျက်သိမ်းပါ ဆော့ဗ်ဝဲအများစုတွင်အကျုံး ၀ င်သည်
CTRL+Y ပြီးခဲ့သည့်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုပြန်ယူပါ ဆော့ဗ်ဝဲအများစုတွင်အကျုံး ၀ င်သည်
CTRL+S စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုသိမ်းဆည်းပါ ဆော့ဗ်ဝဲအများစုတွင်အကျုံး ၀ င်သည်
CTRL+P ပုံနှိပ် ဆော့ဗ်ဝဲအများစုတွင်အကျုံး ၀ င်သည်
CTRL + ဘယ်သို့မဟုတ်ညာမြှား cursor ကိုအရင်သို့မဟုတ်နောက်စာလုံး၏အစသို့ရွှေ့ပါ ဆော့ဗ်ဝဲအများစုတွင်အကျုံး ၀ င်သည်
CTRL + မြှားတက်သို့မဟုတ်မြှား cursor ကိုအရင်နှင့်နောက်စာပိုဒ်၏အစသို့ရွှေ့ပါ ဆော့ဗ်ဝဲအများစုတွင်အကျုံး ၀ င်သည်
Alt + Tab ပွင့်လင်းသောလျှောက်လွှာတစ်ခုမှတစ်ခုသို့သွားပါ ယေဘူယျအားဖြင့် Windows 10 မှာတရားဝင်သည်
alt + F4 active element ကိုပိတ်ပါသို့မဟုတ် active application ကိုပိတ်ပါ ယေဘူယျအားဖြင့် Windows 10 မှာတရားဝင်သည်
Windows ကို + L ကို သင့် PC ကို Lock လုပ်ပါ ယေဘူယျအားဖြင့် Windows 10 မှာတရားဝင်သည်
Windows ကို + D နဲ့ Desktop ကိုပြသပြီးဝှက်ထားပါ ယေဘူယျအားဖြင့် Windows 10 မှာတရားဝင်သည်
F2 ရွေးချယ်ထားသည့်ပစ္စည်းအမည်ပြောင်းပါ ယေဘူယျအားဖြင့် Windows 10 မှာတရားဝင်သည်
F3 ဖိုင်ရှာဖွေသူမှဖိုင်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဖိုင်တွဲကိုရှာပါ ယေဘူယျအားဖြင့် Windows 10 မှာတရားဝင်သည်
F4 ဖိုင်ရှာဖွေသူရှိလိပ်စာဘားစာရင်းကိုပြပါ ယေဘူယျအားဖြင့် Windows 10 မှာတရားဝင်သည်
F5 တက်ကြွသော window ကို refresh ယေဘူယျအားဖြင့် Windows 10 မှာတရားဝင်သည်
F6 ဖန်သားပြင်တစ်ခုသို့မဟုတ် ၀ င်းဒိုးပေါ်မှဖန်သားပြင်များကိုကြည့်ပါ ယေဘူယျအားဖြင့် Windows 10 မှာတရားဝင်သည်
F10 တက်ကြွသောလျှောက်လွှာရှိမီနူးဘားကိုဖွင့်ပါ ယေဘူယျအားဖြင့် Windows 10 မှာတရားဝင်သည်
alt + F8 သင်၏စကားဝှက်ကိုလော့အင်ဝင်မျက်နှာပြင်တွင်ပြပါ ယေဘူယျအားဖြင့် Windows 10 မှာတရားဝင်သည်
Alt + Esc ပစ္စည်းများကိုသူတို့ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့်အတိုင်းကြည့်ပါ ယေဘူယျအားဖြင့် Windows 10 မှာတရားဝင်သည်
Alt + မျဉ်းသားအက္ခရာ ဒီစာအတွက် command ကိုပြီးအောင်လုပ်ပါ ယေဘူယျအားဖြင့် Windows 10 မှာတရားဝင်သည်
Alt + Enter ရွေးချယ်ထားသည့်ဒြပ်စင်၏ဂုဏ်သတ္တိများကိုပြသပါ ယေဘူယျအားဖြင့် Windows 10 မှာတရားဝင်သည်
Alt + အာကာသဘား Active console window ၏ shortcut menu ကိုဖွင့်ပါ ယေဘူယျအားဖြင့် Windows 10 မှာတရားဝင်သည်
Alt + ဘယ်ဖက်မြား ပြန်လာ ယေဘူယျအားဖြင့် Windows 10 မှာတရားဝင်သည်
Alt + ညာမြှား အောက်ပါ ယေဘူယျအားဖြင့် Windows 10 မှာတရားဝင်သည်
Alt + ရှေ့စာမျက်နှာ စာမျက်နှာတစ်ခုတက်ပါ ယေဘူယျအားဖြင့် Windows 10 မှာတရားဝင်သည်
Alt + နောက်စာမျက်နှာ စာမျက်နှာတစ်မျက်နှာဆင်းသွားပါ ယေဘူယျအားဖြင့် Windows 10 မှာတရားဝင်သည်
CTRL+F4 သင့်တွင်စာရွက်စာတမ်းမျိုးစုံဖွင့်ရန်ခွင့်ပြုသည့်တက်ကြွသောစာရွက်စာတမ်းများကိုဖန်သားပြင်အပြည့်ဖြင့်ပိတ်ပါ ယေဘူယျအားဖြင့် Windows 10 မှာတရားဝင်သည်
CTRL+A စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ပြတင်းပေါက်ရှိပစ္စည်းများအားလုံးကိုရွေးချယ်ပါ ယေဘူယျအားဖြင့် Windows 10 မှာတရားဝင်သည်
CTRL + D (သို့မဟုတ်ဖျက်ပါ) ရွေးချယ်ထားသောအချက်ကိုပယ်ဖျက်ပြီးထိုအမှိုက်သို့ရွှေ့ပါ ယေဘူယျအားဖြင့် Windows 10 မှာတရားဝင်သည်
CTRL + R (သို့မဟုတ် F5) တက်ကြွသော window ကို refresh ယေဘူယျအားဖြင့် Windows 10 မှာတရားဝင်သည်
CTRL+Y ပြောင်းလဲမှုများကိုပြန်ယူပါ ယေဘူယျအားဖြင့် Windows 10 မှာတရားဝင်သည်
CTRL + Right arrow cursor ကိုနောက်စာလုံး၏အစသို့ရွှေ့ပါ ယေဘူယျအားဖြင့် Windows 10 မှာတရားဝင်သည်
CTRL + ဘယ်ဖက်မြား cursor ကိုအရင်စာလုံး၏အစသို့ရွှေ့ပါ ယေဘူယျအားဖြင့် Windows 10 မှာတရားဝင်သည်
CTRL + Down မြှား cursor ကိုနောက်စာပိုဒ်၏အစသို့ရွှေ့ပါ ယေဘူယျအားဖြင့် Windows 10 မှာတရားဝင်သည်
CTRL + Up ကိုမြှား cursor ကိုအရင်စာပိုဒ်၏အစသို့ရွှေ့ပါ ယေဘူယျအားဖြင့် Windows 10 မှာတရားဝင်သည်
CTRL + Alt + Tab ပွင့်လင်း applications များအကြားပြောင်းရန်မြှားခလုတ်များကိုသုံးပါ ယေဘူယျအားဖြင့် Windows 10 မှာတရားဝင်သည်
Alt + Shift + မြားသော့ မီနူးတွင်အုပ်စုတစ်ခုသို့မဟုတ်သမ်းနေးတစ်ခုကိုမီးမောင်းထိုးပြသောအခါ၎င်းကိုစတင်ပါသို့မဟုတ်ညွှန်ပြသည့်လမ်းကြောင်းအတိုင်းရွှေ့ပါ ယေဘူယျအားဖြင့် Windows 10 မှာတရားဝင်သည်
CTRL + Shift + မြားသော့ Start menu တွင်သမ်းနေးတစ်ခုကိုမီးမောင်းထိုးပြသည့်အခါဖိုလ်ဒါတစ်ခုဖန်တီးရန်အခြားသမ်းနေးတစ်ခုကိုရွှေ့ပါ ယေဘူယျအားဖြင့် Windows 10 မှာတရားဝင်သည်
CTRL + မြှားသော့များ ပွင့်လင်းလာသောအခါ start menu ကို resize ယေဘူယျအားဖြင့် Windows 10 မှာတရားဝင်သည်
CTRL + ဦး တည်ချက် + အာကာသ ပစ္စည်းများစွာကို ၀ င်းဒိုးတစ်ခု (သို့) စားပွဲပေါ်မှရွေးချယ်ပါ ယေဘူယျအားဖြင့် Windows 10 မှာတရားဝင်သည်
CTRL + Shift ဦး တည်ချက်ဖြင့်စာသားပိတ်ပင်တားဆီးမှုကိုရွေးချယ်ပါ ယေဘူယျအားဖြင့် Windows 10 မှာတရားဝင်သည်
CTRL + Esc Start menu ကိုဖွင့်ပါ ယေဘူယျအားဖြင့် Windows 10 မှာတရားဝင်သည်
CTRL + Shift + Esc task manager ကိုဖွင့်ပါ ယေဘူယျအားဖြင့် Windows 10 မှာတရားဝင်သည်
CTRL + Shift မျိုးစုံသောကီးဘုတ်အပြင်အဆင်များရရှိပါကကီးဘုတ်အဆင်အပြင်ကိုပြောင်းပါ ယေဘူယျအားဖြင့် Windows 10 မှာတရားဝင်သည်
CTRL + Space bar Chinese Input Method Editor (IME) ကိုဖွင့်သို့မဟုတ်ပိတ်ပါ။ ယေဘူယျအားဖြင့် Windows 10 မှာတရားဝင်သည်
Shift + F10 ရွေးချယ်ထားသည့်ဒြပ်စင်၏ဆက်စပ်မီနူးကိုပြသပါ ယေဘူယျအားဖြင့် Windows 10 မှာတရားဝင်သည်
မည်သည့်မြှား key ကိုနှင့်အတူ Shift အရာဝတ္ထုများစွာကိုဝင်းဒိုးတစ်ခု (သို့) desktop ပေါ်မှရွေးချယ်ပါ၊ သို့မဟုတ်စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုတွင်စာသားကိုရွေးပါ ယေဘူယျအားဖြင့် Windows 10 မှာတရားဝင်သည်
Shift + ဖျက်ပါ ရွေးချယ်ထားသောအရာအားလုံးကိုအမှိုက်ပုံးထဲ ဦး စွာမရွှေ့ဘဲဖျက်ပစ်ပါ ယေဘူယျအားဖြင့် Windows 10 မှာတရားဝင်သည်
မြှား ညာဘက်ရှိနောက် menu ကိုဖွင့်ပါသို့မဟုတ် submenu ကိုဖွင့်ပါ ယေဘူယျအားဖြင့် Windows 10 မှာတရားဝင်သည်
ဘယ်ဖက် ဘယ်ဘက်ရှိနောက် menu ကိုဖွင့်ပါသို့မဟုတ် submenu ကိုပိတ်ပါ ယေဘူယျအားဖြင့် Windows 10 မှာတရားဝင်သည်
လွတ်မြောက် တိုးတက်မှုကိုအတွက်အလုပ်ရပ်တန့်သို့မဟုတ်ကြားဖြတ် ယေဘူယျအားဖြင့် Windows 10 မှာတရားဝင်သည်
Imp ပုံနှိပ်ပါ စခရင်ရိုက်ကူးခွင့်ပြုသည် ယေဘူယျအားဖြင့် Windows 10 မှာတရားဝင်သည်
Windows ကို Start menu ကိုဖွင့်ပါ ယေဘူယျအားဖြင့် Windows 10 မှာတရားဝင်သည်
Windows + I ပါ Windows settings ကိုလျှင်မြန်စွာရယူပါ ယေဘူယျအားဖြင့် Windows 10 မှာတရားဝင်သည်
Windows+A အသိပေးစင်တာကိုပြပါ ယေဘူယျအားဖြင့် Windows 10 မှာတရားဝင်သည်
Windows ကို + E ကို file explorer ကိုပြပါ ယေဘူယျအားဖြင့် Windows 10 မှာတရားဝင်သည်
Windows ကို + S ကို Windows ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုဖွင့်ပါ ယေဘူယျအားဖြင့် Windows 10 မှာတရားဝင်သည်
Windows ကို + R ကို အမိန့်တစ်ခု execute ရန် ယေဘူယျအားဖြင့် Windows 10 မှာတရားဝင်သည်
Windows + Shift + S အကယ်၍ ပုံနှိပ်မျက်နှာပြင်သော့သည်အလုပ်မလုပ်လျှင်စကရင်ကိုရိုက်ပါ ယေဘူယျအားဖြင့် Windows 10 မှာတရားဝင်သည်
Windows + ဘယ်ညာသို့မဟုတ်မြှား ဝင်းဒိုးကိုမျက်နှာပြင်တစ်ဖက်သို့ရွှေ့ပါ ပြတင်းပေါက်များအကြားလှုပ်ရှားမှုအထူး
Windows + အပေါ်သို့မဟုတ်အောက်သို့မြှား မြင်ကွင်းအရွယ်အစားကိုချဲ့ပါသို့မဟုတ်လျှော့ချပါ ပြတင်းပေါက်များအကြားလှုပ်ရှားမှုအထူး
Windows+M ပြတင်းပေါက်အားလုံးကိုလျှော့ချပါ ပြတင်းပေါက်များအကြားလှုပ်ရှားမှုအထူး
CTRL+N တက်ကြွသောလျှောက်လွှာအသစ်တစ်ခုကိုဖွင့်ပါ ပြတင်းပေါက်များအကြားလှုပ်ရှားမှုအထူး
CTRL+W active window ကိုပိတ်ပါ ပြတင်းပေါက်များအကြားလှုပ်ရှားမှုအထူး
Windows ကို + D နဲ့ ပွင့်လင်းတဲ့ application ကိုပြောင်းပါ ပြတင်းပေါက်များအကြားလှုပ်ရှားမှုအထူး
alt + F4 တက်ကြွစွာ program ကိုပိတ်ပါ ပြတင်းပေါက်များအကြားလှုပ်ရှားမှုအထူး
CTRL + Shift + N ကို ဖိုင်တွဲအသစ်တစ်ခုဖန်တီးပါ ပြတင်းပေါက်များအကြားလှုပ်ရှားမှုအထူး
F5 ဝင်းဒိုးအကြောင်းအရာများကို refresh ပြတင်းပေါက်များအကြားလှုပ်ရှားမှုအထူး
F4 တက်ကြွစာရင်းထဲတွင်ပစ္စည်းများပြပါ ပေးတဲ့ dialog box များအတွက်အထူး
CTRL + Tab tabs များတွင်ရွေ့လျား ပေးတဲ့ dialog box များအတွက်အထူး
CTRL + Shift + Tab tabs များပြန်သွားပါ ပေးတဲ့ dialog box များအတွက်အထူး
1 နှင့်9အကြား CTRL + နံပါတ် သင်စိတ်ဝင်စားသော tab သို့ရွှေ့ပါ ပေးတဲ့ dialog box များအတွက်အထူး
ဇယား ရွေးချယ်စရာများမှတဆင့်ရွှေ့ရန် ပေးတဲ့ dialog box များအတွက်အထူး
Shift + Tab ကိုနှိပ်ပါ ရွေးစရာများကိုပြန်သွားပါ ပေးတဲ့ dialog box များအတွက်အထူး
Alt + မျဉ်းသားအက္ခရာ command ကို Execute သို့မဟုတ်ဤစာနှင့်အတူအသုံးပြုသော option ကိုရွေးပါ ပေးတဲ့ dialog box များအတွက်အထူး
Space bar active option သည် check box ဖြစ်ပါက check box ကိုသက်ဝင်စေခြင်းသို့မဟုတ်ပိတ်ခြင်း ပေးတဲ့ dialog box များအတွက်အထူး
Backspace သိမ်းဆည်းအဖြစ်သို့မဟုတ်ဖွင့်ရန်ဒိုင်ယာလော့ခ်တွင်ဖိုင်တွဲတစ်ခုကိုရွေးပါကထိပ်တန်းဖိုင်တွဲကိုဖွင့်ပါ ပေးတဲ့ dialog box များအတွက်အထူး
မြားသော့ active option သည် option ခလုတ်များအုပ်စုတစ်စုဖြစ်ပါကခလုတ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ ပေးတဲ့ dialog box များအတွက်အထူး
Alt+D လိပ်စာဘားကိုရွေးချယ်ပါ windows file explorer အတွက်သီးသန့်
CTRL + E ကို ရှာဖွေရေးareaရိယာကိုရွေးပါ windows file explorer အတွက်သီးသန့်
CTRL + F ကို ရှာဖွေရေးareaရိယာကိုရွေးပါ windows file explorer အတွက်သီးသန့်
CTRL+N ဝင်းဒိုးအသစ်ဖွင့်ပါ windows file explorer အတွက်သီးသန့်
CTRL+W active window ကိုပိတ်ပါ windows file explorer အတွက်သီးသန့်
CTRL + မောက်စ်ဘီး စာသားအရွယ်အစား၊ ဖိုင်အဆင်အပြင်နှင့်ဖိုင်တွဲအိုင်ကွန်များကိုပြောင်းပါ windows file explorer အတွက်သီးသန့်
CTRL + Shift + အီး ရွေးချယ်ထားသည့်ဖိုင်တွဲအထက်ရှိဖိုလ်ဒါများအားလုံးကိုပြပါ windows file explorer အတွက်သီးသန့်
CTRL + Shift + N ကို ဖိုလ်ဒါတစ်ခုဖန်တီးပါ windows file explorer အတွက်သီးသန့်
Ver Num + ကြယ်ပွင့် (*) ရွေးချယ်ထားသည့်ဖိုင်တွဲအောက်ရှိဖိုင်တွဲငယ်များအားလုံးကိုပြပါ windows file explorer အတွက်သီးသန့်
Ver Num + ပေါင်းလက္ခဏာ (+) ရွေးချယ်ထားသည့်ဖိုင်တွဲ၏ contents ကိုပြပါ windows file explorer အတွက်သီးသန့်
Num Num + အနုတ် (-) ရွေးချယ်ထားသည့်ဖိုင်တွဲကိုဖျက်သိမ်းပါ windows file explorer အတွက်သီးသန့်
Alt+P preview အကန့်ကိုပြပါ windows file explorer အတွက်သီးသန့်
Alt + Enter ရွေးချယ်ထားသောဒြပ်စင်အတွက်ဂုဏ်သတ္တိများပေးတဲ့ dialog ကိုဖွင့်ပါ windows file explorer အတွက်သီးသန့်
Alt + ညာမြှား နောက်ဖိုလ်ဒါကိုပြပါ windows file explorer အတွက်သီးသန့်
Alt + Up မြှား ဖိုင်တွဲ၏တည်နေရာကိုကြည့်ပါ windows file explorer အတွက်သီးသန့်
Alt + ဘယ်ဖက်မြား ယခင်ဖိုင်တွဲကိုကြည့်ပါ windows file explorer အတွက်သီးသန့်
Backspace ယခင်ဖိုင်တွဲကိုကြည့်ပါ windows file explorer အတွက်သီးသန့်
မြှား လျှော့ထားသောအခါလက်ရှိရွေးချယ်မှုကိုပြပါသို့မဟုတ်ပထမခွဲတွဲကိုရွေးပါ windows file explorer အတွက်သီးသန့်
ဘယ်ဖက် တိုးချဲ့သည့်အခါလက်ရှိရွေးချယ်မှုကိုလျှော့ချပါသို့မဟုတ်ဖိုင်တွဲတည်နေရာရှိဖိုင်တွဲကိုရွေးချယ်ပါ windows file explorer အတွက်သီးသန့်
ငါးဆူး တက်ကြွသော ၀ င်းဒိုး၏အောက်ခြေကိုပြပါ windows file explorer အတွက်သီးသန့်
အစ တက်ကြွသော ၀ င်းဒိုး၏ထိပ်ကိုပြပါ windows file explorer အတွက်သီးသန့်
F11 တက်ကြွသော ၀ င်းဒိုးကိုအမြင့်ဆုံးသို့မဟုတ်လျှော့ချပါ windows file explorer အတွက်သီးသန့်
Windows + လက်ဝဲ arrow ဘယ်ဘက်သို့တက်ကြွသော ၀ င်းဒိုးကိုဖွင့်သည် တက်ကြွသောပြတင်းပေါက်၏စီမံခန့်ခွဲမှုမှအထူး
Windows + Right arrow တက်ကြွသော ၀ င်းဒိုးကိုညာဘက်သို့ပြောင်းသည် တက်ကြွသောပြတင်းပေါက်၏စီမံခန့်ခွဲမှုမှအထူး
Windows + Up arrow တက်သောတက်ကြွသော ၀ င်းဒိုးကိုထိပ်သို့ဖွင့်ပါသို့မဟုတ် ၀ င်းဒိုးကိုမျက်နှာပြင်အပြည့်သို့ပြောင်းသည် တက်ကြွသောပြတင်းပေါက်၏စီမံခန့်ခွဲမှုမှအထူး
Windows + Down arrow ပြတင်းပေါက်ကိုဖွင့်ပါ တက်ကြွသောပြတင်းပေါက်၏စီမံခန့်ခွဲမှုမှအထူး
CTRL သို့မဟုတ် F5 + R ကို တက်ကြွသော window ကို refresh တက်ကြွသောပြတင်းပေါက်၏စီမံခန့်ခွဲမှုမှအထူး
F6 ဖန်သားပြင်တစ်ခုသို့မဟုတ် ၀ င်းဒိုးပေါ်မှဖန်သားပြင်များကိုကြည့်ပါ တက်ကြွသောပြတင်းပေါက်၏စီမံခန့်ခွဲမှုမှအထူး
Alt + Space bar Active window ၏ context menu ကိုဖွင့်ပါ တက်ကြွသောပြတင်းပေါက်၏စီမံခန့်ခွဲမှုမှအထူး
F4 တက်ကြွစာရင်းထဲတွင်ပစ္စည်းများပြပါ တက်ကြွသောပြတင်းပေါက်၏စီမံခန့်ခွဲမှုမှအထူး
CTRL + တဘ် tabs များပတ်ပတ်လည်ရွှေ့ပါ တက်ကြွသောပြတင်းပေါက်၏စီမံခန့်ခွဲမှုမှအထူး
CTRL + Shift + Tab tabs များပြန်သွားပါ တက်ကြွသောပြတင်းပေါက်၏စီမံခန့်ခွဲမှုမှအထူး
1-9 မှ CTRL + နံပါတ် သတ်မှတ်ထားသော tab ကိုသွားပါ တက်ကြွသောပြတင်းပေါက်၏စီမံခန့်ခွဲမှုမှအထူး
tab ကို ရွေးချယ်မှုများမှတဆင့်ရွှေ့ပါ တက်ကြွသောပြတင်းပေါက်၏စီမံခန့်ခွဲမှုမှအထူး
Shift + Tab ကိုနှိပ်ပါ ရွေးစရာများကိုပြန်သွားပါ တက်ကြွသောပြတင်းပေါက်၏စီမံခန့်ခွဲမှုမှအထူး
Alt + မျဉ်းသားအက္ခရာ command ကို execute သို့မဟုတ်ဤစာနှင့်ဆက်စပ်သော option ကိုရွေးပါ တက်ကြွသောပြတင်းပေါက်၏စီမံခန့်ခွဲမှုမှအထူး
အာကာသ active option သည် check box ဖြစ်ပါက check box ကိုသက်ဝင်စေခြင်းသို့မဟုတ်ပိတ်ခြင်း တက်ကြွသောပြတင်းပေါက်၏စီမံခန့်ခွဲမှုမှအထူး
Backspace "သိမ်းဆည်းရန်" သို့မဟုတ် "ဖွင့်လှစ်" ပေးတဲ့ dialog မှာဖိုင်တွဲတခုကိုရွေးထားတယ်ဆိုရင်အဆင့်မြင့်ဖိုင်တွဲကိုဖွင့်ပါ တက်ကြွသောပြတင်းပေါက်၏စီမံခန့်ခွဲမှုမှအထူး
မြားသော့ active option သည် option ခလုတ်များအုပ်စုတစ်စုဖြစ်ပါကခလုတ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ တက်ကြွသောပြတင်းပေါက်၏စီမံခန့်ခွဲမှုမှအထူး
Windows+Q Cortana ကိုဖွင့်ပြီးသင်၏ voice command ကိုစောင့်ပါ Cortana ကိုသုံးရန်
Windows ကို + S ကို Cortana ကိုဖွင့်ပါ၊ Cortana ကိုသုံးရန်
Windows + I ပါ Windows 10 settings panel ကိုဖွင့်လှစ် Cortana ကိုသုံးရန်
Windows+A Windows 10 အကြောင်းကြားစာကိုဖွင့်လှစ် Cortana ကိုသုံးရန်
Windows ကို + X Start button ၏ context menu ကိုဖွင့်သည် Cortana ကိုသုံးရန်
Windows သို့မဟုတ် CTRL + Esc Start menu ကိုဖွင့်ပါ start menu အတွက်သီးသန့်
Windows ကို + X လျှို့ဝှက်စတင်မီနူးကိုဖွင့်ပါ start menu အတွက်သီးသန့်
Windows + T ပါ အက်ပ်များကို taskbar တွင်ရှာဖွေပါ start menu အတွက်သီးသန့်
Windows + [နံပါတ်] Tinned app ကို taskbar နေရာတွင်ဖွင့်ပါ start menu အတွက်သီးသန့်
1 မှ9အထိ Windows + Alt + နံပါတ် taskbar ရှိနေရာပေါ် မူတည်၍ ထည့်သွင်းထားသော application ၏ context menu ကိုဖွင့်သည် start menu အတွက်သီးသန့်
Windows ကို + D နဲ့ Desktop ကိုပြသသို့မဟုတ်ဖုံးကွယ်ပါ start menu အတွက်သီးသန့်
Windows+CTRL+D Virtual Office အသစ်တစ်ခုဖန်တီးပါ ကို virtual ရုံးများမှအထူး
Windows + CTRL + လက်ဝဲ arrow ဘယ်ဘက်သို့သင့်ရုံးများအကြားသွားပါ ကို virtual ရုံးများမှအထူး
Windows + CTRL + Right arrow သင်၏ရုံးများအကြားညာဘက်သို့သွားပါ ကို virtual ရုံးများမှအထူး
Windows + CTRL + F4 တက်ကြွသော desktop ကိုပိတ်ပါ ကို virtual ရုံးများမှအထူး
Windows + တက်ဘ် သင်၏စာသင်ခုံများနှင့်ဖွင့်ထားသော application အားလုံးပြသရန် ကို virtual ရုံးများမှအထူး
CTRL + Windows နှင့်ဘယ်၊ ညာ ရုံးခန်းတစ်ခုကနေတစ်ခုဆီသွားဖို့ ကို virtual ရုံးများမှအထူး
CTRL + မောက်စ်ဘီး စာမျက်နှာတစ်ခုပေါ်တွင်ချဲ့ပြီးစာလုံးအရွယ်အစားကိုချဲ့ပါ လက်လှမ်းမှီသည်
Windows နှင့် - သို့မဟုတ် + သင့်အားမှန်ဘီလူးဖြင့်ချဲ့နိုင်သည် လက်လှမ်းမှီသည်
Windows+CTRL+M Windows 10 အသုံးပြုနိုင်မှုဆက်တင်များကိုဖွင့်သည် လက်လှမ်းမှီသည်
ဖတ်ရန် သူ၏တွစ်တာပရိုဖိုင်းကိုရှင်းလင်းနှင့်သူ၏ Image ကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်စေဘယ်လိုနေသလဲ?
Windows 10 တွင် Keyboard Shortcut များအပြည့်အစုံ မေလ 7th, 2020Tranquillus
လွန်ခဲ့သောMicrosoft Word မှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အခြေခံတွေကိုဘယ်လိုစုစည်းမလဲ။
အောက်ပါMicrosoft PowerPoint - အသုံးဝင်မှုနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုနားလည်သည်။
Google ကလှုပ်ရှားမှု, ဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုက Google နှင့်၎င်း၏အမျိုးမျိုးသောန်ဆောင်မှုများနှင့် ဆက်စပ်. ၌သင်တို့၏လှုပ်ရှားမှုများအကြောင်းကိုအရာအားလုံးကိုသိရန်။
သူ၏တွစ်တာပရိုဖိုင်းကိုရှင်းလင်းနှင့်သူ၏ Image ကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်စေဘယ်လိုနေသလဲ?